Achara oriọna achara nwere ụdị dị iche iche, mana ị maara ịkpa akwa nke oriọna achara? Methodszọ ịkpa akwa dị iche iche nke usoro ịkpa akwa dịkwa iche, a na-emepụta ụdị ịkpa akwa dị ka mkpa ndị mmadụ si dị, gịnị kpatara n'oge taa nke usoro ọkụ ọkụ bamboo ga-adị ọtụtụ Ihe kpatara nke a bụ na ihe ndị mmadụ na-achọ dị elu. Ndị mmadụ nwere echiche nke ha gbasara ịchọ mma ọkụ chọrọ ebe dị iche iche. Mgbe ụfọdụ, ebe obibi dị elu ga-akwalite ọganihu mmadụ wee hụ ụwa n'anya.
Ruo n'ókè ụfọdụ, mgbanwe nke ejiji na-egosi ọganihu nke Times ma na-egosi nduzi ọhụrụ nke cognition ndị mmadụ banyere ịma mma.
Bamboo mara mma, ị wetuo obi iji nwee ekele, ịnụ ụtọ ịma mma nke aka ya.Ka obi gị na-agba ume, ọnọdụ iwe na-eji nwayọ nwayọ, nụ ụwa a mara mma, ọha mmadụ a ị bi na ya, mee ka ị ghọta ndụ ndụ, nwekwuo obi ụtọ na ndụ.
Ọhụụ ahụ nke ihe mara mma nwere ike ime ka mmadụ nwee obi ụtọ, kedu nke bụ, oriọna nke nwere ọtụmọbụ wee bụrụ ọrụ nke, ọ bụ na ọ dịghị atụ gị n'anya? Buyzụta ochicho mma n'ụlọ, ịchọ mma n'ụlọ ahịa, ka ụlọ gị na ụlọ ahịa gị nwere ike inwe mmasi nke ha, obughi nani ka ha nwee obi uto nke ndi ha, ndi obia nwekwara ike ime ka ocha, me ka ihu oma ya na mmetuta gi di oh.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ụdị ọkụ ọkụ achara, ị nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ anyị Xin Sanxing Lighting iji mata ma ọ bụ kpọtụrụ anyị.Our factory na-agba mbọ inweta ihe nketa ma na-ebugharị ọrụ aka akwụkwọ ntuziaka ndị China, iji ihe okike na-echekwa gburugburu ebe obibi. : ihe ndị dị ka achara, osisi, mkpanaka, igwu ala, goro otu ndị omenkà, r & d na kpaa usoro ga-adabara ndụ mmekọrịta dị ugbu a chọrọ oriọna achara rattan oriọna na lanterns, ngwaahịa e ọtụtụ-eji n'ụlọ ọnụnọ owuwu, sinik tụrụ, e ji mara nri, omenala na obodo ochie, ugbo, teahouse, cafe, onwe elu-ọgwụgwụ ntụrụndụ klọb, na ndị ọzọ na ubi.Ọ bụrụ na ị nwere omenala ịke, ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ahịa ọrụ ma ọ bụ pịa anyị kọntaktị ozi, biko cheta mee ka gị ịke osise na nha.